I-Trapiche amethyst iyinhlobonhlobo engandile ye-quartz ebubende - ukwakheka kombala - Video
Thenga i-trapiche amethyst yemvelo esitolo sethu
I-Trapiche amethyst (noma i-amethyst-efana ne-amethyst) iyinhlobonhlobo engandile ye-quartz ebubende enemibala engafani nenye. Kulula ukukhomba
Amatshe ayigugu afana noTrapiche
Amagugu e-trapiche weqiniso ane-inclusions phakathi kwezingxenye zokukhula. Kodwa-ke, ukwahlukanisa imibala okulula noma ukukhula okufakiwe ngaphakathi kwekristalu kungadala amaphethini "afana ne-tracksiche-like" kwamanye amagugu. Lokhu kusho ukuthi i-crystal yalezi zixhobo ezinjengesikejana se-trapiche iyaqhubeka, kanti ekucasheni kweqiniso amaminerali ahlukaniswe imikhakha ekhula ngawodwana.
Noma kunjalo, la magugu anokulinganisa okumangalisa okuhambisana namagugu we-trapiche futhi akuvamile kakhulu. Amaminerali afanayo akha i-trapiches yeqiniso angakheka njengombala we-tracksiche-like colorization noma, esimweni se-quartz esiqeqeshiwe, i-inclusions emangalisa yamaphethini. Ngaphezu kwalokho amadayimane ne-pezzottaite angakhula abe ngamagugu anjenge-trapiche-like.
Izimbiwa ezinemikhuba engaphansi kokulinganisa kwekristalu nazo zingakha amagugu we-trackiche-like. Isibonelo, i-trapiche-like rhodochrosite yenzeka eArgentina.
Ama-amethyst wemvelo ngumbala onsomi ophuzi we-crystalline quartz. Ikweleta umbala wayo we-violet ngenxa yokuchuma kwemvelo kokungcola kwensimbi. Kwezinye izimo ngokuhlangana nokungcola kwento yokuguqula. Ukuba khona kwezinto ezilandelwayo kuphumela ekungeneni okuyinkimbinkimbi kwe-crystal lattice. Futhi, ubulukhuni bezimbiwa buyafana ne-quartz. Ngakho-ke ilungele ukusetshenziswa kubucwebe ngentengo engabizi.
I-amethyst gemstone yenzeka kuma-hues ayisisekelo. Kusuka ku-pinkish violet okhanyayo onsomi kuya ku-nsomi onsomi. Kungakhombisa ama-hues wesibili noma amabili: obomvu nokuhlaza okwesibhakabhaka. ISiberia, futhi neSri Lanka, iBrazil ne-Asia yimithombo yemayini yezinhlobo ezinhle kakhulu. I-siberian ejulile igama elifanele lesigaba. Inombala onsomi ophuzi onsomi ozungeze i-75 / 80%, ene-15 / 20% eluhlaza okwesibhakabhaka. Kuya ngomthombo wokukhanya.
Trapiche amethyst nencazelo
UTrapiche Amethyst kuthiwa uqinisa ama-endocrine namasosha omzimba. Ngenxa yokwakheka okuhlukile kwekristalu, kuthiwa kukhuthaza ukusebenza kobuchopho, kwandise ukugxilisa ingqondo, futhi kunikeze amandla umuntu okugqokile. Leli litshe futhi kuthiwa ligqamisa amakhono we-psychic, lihle kakhulu ekuphatheni amandla ngesikhathi sokuzindla. Noma ngabe yiziphi izinkolelo zakho, kwangathi ungayijabulela iTrapiche Amethyst yakho.
Amathegi Sapphire, Trapiche